अरुले दिने सेवा भन्दा जलजला यातायात समितिले एक कदम अगाडी रहेर सेवा दिन्छ ! | राेल्पा अनलाइन
अरुले दिने सेवा भन्दा जलजला यातायात समितिले एक कदम अगाडी रहेर सेवा दिन्छ !
राेल्पा अनलाइन Thursday, December 29, 2016
रोल्पा जिल्लामा पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा प्रालिहरु दर्ता गरी गाडी सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको छ । कुनैबेला एकलौटी रुपमा सेवा दिदैं आएको जलजला यातायात व्यवसायी समितिले अहिले रोल्पा यातायात प्रालि र जलजला यातायात प्रालिसँग प्रतिष्पर्धा गर्न के–कस्ता योजना बनाउदैं छ ? अबको योजना के छ ? यि लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर जलजला यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष तेजबिक्रम रावतसँग रोल्पा अनलाइनका प्रधान सम्पादक माधवकुमार ओलीले गरेको सम्वाद :-
जिल्लामा दुई वटा यातायात प्रा.लि. सञ्चालनमा आएका छन् । पहिलेको जस्तो जलजला यातायात व्यवसायी समितिका गाडीहरु एक्लौटी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न के योजना बनाउनु भएको छ ?
– जिल्लामा प्रा.लि. दर्ता हुनु सञ्चालन हुनु हाम्रा लागि कुनै आपत्तिको विषय होइन् । सरकारको नियमसँगत सञ्चालनमा आएका प्रा.लि.हुनु स्वभाविकै हो । अब हाम्रो योजना के छ त भन्ने बारेमा हामीले विगत १० वर्षदेखी रोल्पा जिल्लामा यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउदैं ग्रामीण भेगमा यातायात सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं ।
जलजला यातायात व्यवसायी समिति, रोल्पा
प्रा.लि.हरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कुनै सेवा सुविधा बढाउने र केहि छुट गर्ने योजना के छ ?
– सेवा सुबिधा बढाउने बारेमा समितिले योजना बनाइरहेको छ । प्रालिहरु सञ्चालनमा आइसके पछि हामीले गाडीको एन्ट्री फि पनि घटाएका छौं । यसभन्दा पहिले हाम्रो समितिमा जीप एन्ट्री गर्दा पाँच लाख फि लाग्थ्यो भने अहिले दुई लाख मात्र गराएका छौं । समितिमा नयाँ गाडीहरु धेरै भन्दा धेरै थपेर प्रालिहरु भन्दा राम्रो सेवा दिने उद्देश्यले हामीले ठूला गाडीहरुमा पनि एन्ट्री फिमा सहुलियत दिइरहेका छौं ।
प्रा.लि.हरु सञ्चालनमा आएपछि एन्ट्री फि घटाउनु भएको छ । फि घटाएपछि गाडीहरु दर्ता हुने क्रम कस्तो छ ?
– यो निर्णय हामीले भर्खरै मात्रै गरेका छौं । हिजो मात्रै सूचना प्रकाशन गरेका छौं । यो भन्दा पहिले पनि दर्ता गर्नेक्रम त जारी नै छ हिजो मात्रै एउटा गाडी तर्दा भएको छ । अब यो सूचनाले गाडी धनीहरुलाई थप आकर्षित गर्छ जस्तो लागेको छ ।
तपाईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित हुदादेखी नै यात्रुमैत्री सेवा दिनको लागि गाडी चालकहरु र कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रशिक्षण दिनुभयो भन्ने सञ्चार माध्यममा आएको थियो त्यसको प्रभाव कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
– मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि विशेषगरी हामीले कसरी ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्ने अनि यसअघि गाडी सञ्चालन भइरहेका रुटमा पनि गाडी थप गर्ने भन्ने योजनामा केन्द्रीत भयौं । अहिलेसम्म हाम्रो कार्यसमिति आइसकेपछि मात्रै विभिनन रुटमा १ सय ७५ क्यू थप गरेका छौं । अर्काे जुन प्रश्न गर्नु भएको थियो । समितिका कर्मचारीहरुलाई बोलाएर एक पटक प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । त्यस्को प्रभाव देखिदैं छ । त्यसपछि जिल्लामा प्रालि सञ्चालनमा आयो हामीले फेरी प्रतिष्पर्धाको योजना बनाउन तिर लागेपछि अहिले प्रशिक्षण कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन् । अब हामीले तत्काल जिल्ला ट्राफिक कार्यालयसँग समन्वय गरी गाडी चालक र सहचालकहरुलाई कानूनी र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका छौं ।
प्रालिहरु सञ्चालनमा आइसके पछि तपाईले प्रतिष्पर्धाका लागि गाडी भाडा लगायतका सेवामा यस्तो सहुलियत दिएका छौं भन्ने दावी गर्ने कुनै काम गर्नु भएको छ ?
– यो खासगरी हामीले भन्दापनि यात्रु महानुभावहरुले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । अब गाडी भाडाको कुरा गर्नु हुन्छ भने रोल्पाबाट काठमाण्डौसम्मंको भाडामा पनि प्रालि भन्दा हाम्रो कम छ जस्तो लाग्छ मलाई र जुन भित्री रुटहरुमा पनि अहिले प्रालि खुल्ने लहर जस्तो चलेको छ । ति रुटहरुमा पनि सहुलियत दिएका छौं ।
जे होस जलजला यातायात व्यवसायी समितिले विगत १० वर्षदेखी यातायात क्षेत्रमा सेवा दिदैं आएका छ । अरुले दिने सेवा भन्दा जलजला समितिले एक कदम अगाडी रहेर सेवा दिन्छ ।
अहिले समितिसँग कतिवटा गाडीहरु छन् ?
– म निर्वाचित भएर आउँदा करिब एक सयको हाराहारीमा साना ठूला गाडीहरु रहेका थिए । अहिलेसम्म मेरो नेतृत्वको कार्यसमिति आइसकेपछि केहि साना गाडी, केहि ओम्नि भ्यान गरेर ८÷१० वटा गाडीहरु एन्ट्री भएका थिए तर अहिले नयाँ यातायात प्रालिमा केहि साना गाडीहरु गएपछि त्यस्तै एक सयकै हाराहारीमा रहेका छन् ।
अहिले समितिले कति जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ ?
– अब कर्मचारीको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले समितिको कर्मचारीहरु मात्रै जम्मा ३५ जनालाई प्रत्येक्ष रुपमा रोजगारी दिएका छौं । भने अप्रत्यक्ष रुपमा गाडीमा करिब ३ सय बढी स्टाफहरु गर्दा करिब साढे तीन सय जनालाई रोजगारी दिएका छौं ।
समितिमा जागिर खानको लागि चुल्ठेमुन्द्रेहरु मात्रै हुनुपर्ने भन्ने प्रचलन छ हो ?
– यसमा तपाईको म निर्वाचित भइसकेपछि निउक्ती प्रक्रियामा अलि फरक गर्न खोजेको थिए । खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी निउक्ती गर्ने भन्नेबारेमा लगभग कार्यसमितिमा निर्णय भइसकेको थियो विज्ञापन खोलौं भन्ने थियो तर अहिले प्रालिहरु सञ्चालन भए त्यसपछि अन्य क्रियाकलापमा हामी केन्द्रीत भयौं त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अघाडी बढ्न सकेको छैन् । अलि वैज्ञानिक ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने बारेमा कार्यसमितिमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सुरुमा निर्वाचित भएर आउदा जति द्रुत गतिमा काम अघाडी बढाउने योजना थियो त्यो पछि विविध कारणले बाधा व्यवधान आएपछि त्यो कामले गति लिन सकेको छैन् । अब ति कामहरु तत्काल अगाडी बढाउछौं ।
यात्रुहरुले के गुनासो गर्छन् भने जिल्लाबाट काठमाण्डौं लगायतका शहरमा यात्रा गर्दा चालकले जुनसुकै ठाउँमा पनि खाना खान रोक्ने अनि राम्रो खाना खान पाइदैन् यसमा तपाईहरुले केहि गर्न सक्नुहुन्न ?
– हो तपाईले भनेको कुरामा एकदम सहमत छु । यो व्यापक जनगुनासो आउने गरेको विषय हो । केहि समयअघि व्यापक गुनासो आएपछि यो स्वास्थ्यलागि गम्भीर विषय भएकाले म आफै गोरुसिङ्गे, चनौता, बुटवल लगायतका ठाउँमा पुगेर यात्रुहरुले कस्ता खाना खुवाइन्छ त भनेर अनुगमन गरेको थिए र त्यहाँका व्यापारीहरुसँग यो कुरा राखेको थिए । पछि केहि समयको लागि सुधार भएको पनि थियो तर पछि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन ।
त्यस्तै हामीले त्यहाँका व्यापारीहरुसँग एक प्रकारको सम्झौता पनि गरेका थियौं । पछि हाम्रा सबै गाडीहरु त्या नजाने समयमा नपुग्ने भएकाले त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यसलाई ति होटल व्यवसायीहरुसँगको सम्झौता अनुसार यात्रुलाई कस्ता खाना खुवाउने, के–के खुवाउने, कसरी खुवाउने भन्ने बारेमा फेरी थप छलफल गरेर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सोंच बनाएका छौं त्यो तुरुन्तै हुन्छ ।
गाडीमा आरक्षण सिट र छुट हुन्छ त्यो कत्तिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् ?
– हामीले सबै गाडीहरुमा आरक्षण सिटहरु छुट्याएका छौं । यसमा त्यहि हो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ यसबारेमा पनि हामी कार्यान्वयन गर्न निर्दशन दिएका छौं । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । आरक्षण छुट नपाएको भन्ने त्यस्तो समस्या देखिएमा कार्यान्वयन गर्न त्यसमा पनि हामी प्रतिबद्ध नै छौं ।
प्रालिहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न तपाईहरुले विशेष केहि गर्ने योजना बनाउनु भएका छ ?
– अब जिल्लामा प्रालि कति खुल्छन् के गर्छन भन्ने भन्दापनि हाम्रो समितिले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरी प्रचारमुखी बोलीमा मात्रै भन्दापनि व्यवहारमा गर्ने हो । यातायात क्षेत्र भएकाले बोलीमा भोली यो गर्छाै त्यो गर्छाै भन्दापनि पछि व्यवहारमा देखाउने कुरा हो तपाईले भनेको जस्तै कस्ले के ग¥यो भन्ने तर्फ म जान चाहन्न यत्ति कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मैले यात्रुहरुलाई दशैं तिहारमा भाडामा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थिए । यो भन्दा पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसैले अरुले के गरे भन्नेमा भन्दा पनि हामीले यात्रुमैत्री सेवा दिने हो । केहि समयमै समितिले डिलक्स बसहरु सञ्चालन गर्ने तर्फ म लगायत मेरो कार्यसमिति लागिरहेको छ । जसरी भएपनि हामीले यात्रुलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने भन्नेमा लागि रहेका छौं ।
– विगत लामो समयदेखी रोल्पालीहरुको सेवामा समर्पित जलजला यातायात व्यवसायी समितिलाई सेवा दिने मौका दिनुहोला । यहाँहरुको माया, स्नेहले गर्दाहामी यहाँसम्म आएका छौं ।
जतिपनि हाम्रो समितिको गाडीमा यात्रा गर्नुहुन्छ यहाँहरुले त्यहाँ हुने समस्याका बारेमा हामीलाई भन्नुहोस हामी त्यसलाई सुधार गर्न तयार छौं । हाम्रो समितिले यहाँहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार सेवा सुविधालाई गुणस्तीय बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।